Izindaba - Isihlungi se-purifier yamanzi kufanele sishintshwe kaningi. Kungenzeka yini ukuqhubeka nokuyisebenzisa? Uzoqonda ngemuva kokufunda
Isici sesihlungi sokuhlanza amanzi kufanele sishintshwe kaningi. Kungenzeka yini ukuqhubeka nokuyisebenzisa? Uzoqonda ngemuva kokufunda
Isici sesihlungi sokuhlanza amanzi esifakwe ekhaya siguqulwa kaningi. Ngingayigeza futhi ngiqhubeke nokuyisebenzisa? Lokhu akukuhle!
ukuphepha kokusetshenziswa kwamanzi ngokujwayelekile, Sikholwa ukuthi imindeni eminingi ifake izinto zokuhlanza amanzi. Amanzi ompompi aphuma ngemuva kokuhlanzwa ngesihlanzisi samanzi futhi ayahlungwa ukwenza ikhwalithi yamanzi ihlanzeke kakhulu. Amanzi ompompi angahlanzwa, ngezinga elikhulu, isikweletu sento yokuhlunga. Isici sesihlungi ngasinye sihlanza umthombo wamanzi, futhi ekugcineni into yokuhlunga ivimba ukungcola.
Ngenxa yalokhu, into yokuhlunga izongcola ngemuva kwesikhathi eside sokusetshenziswa, futhi izolahlekelwa ngumsebenzi wokuhlanza amanzi. Ngalesi sikhathi, i-elementi yesihlungi idinga ukushintshwa ukuze kuqhubeke kusetshenziswa isihlanzamanzi. Ngemuva kokusebenzisa okokuhlanza amanzi, abangani abaningi basho inkinga, okungukuthi, izindleko zokusebenzisa isihlanza amanzi ukufaka into yesihlungi kungekudala zizodlula intengo yokuhlanza amanzi.
Eqinisweni, kunjalo. Intengo yokuhlanza amanzi icishe ibe izingcezu eziyizinkulungwane ezimbalwa. Kodwa-ke, isihlanzisi samanzi sinezinto zokuhlunga eziningana, ezinye izinto eziningi zokuhlunga, futhi ezinye izakhi zokuhlunga, futhi ezinye izinto zokuhlunga zithatha izinyanga ezimbalwa. Kudinga ukushintshwa kanye ezinyangeni eziyisithupha noma kanye ngonyaka. Izindleko zento yokuhlunga kanye nezindleko ezisendaweni yokufaka into yokuhlunga empeleni iphezulu kakhulu.
Abanye abangane baphakamise ukuthi njengoba kubiza kakhulu ukushintsha into yokuhlunga, ungayikhipha uyigeze wedwa bese uyayisebenzisa? Yigeze ngamanzi bese uyibuyisela futhi, ngabe izothinta ukusetshenziswa kwayo?
Okokuqala, ukwakheka kwento yokuhlunga akulula njengoba sicabanga. Isici sesihlungi sehlukaniswe ngezinto ezahlukahlukene zokuhlunga ukungcola okuhlukahlukene okukhulu nokuncane. Sikhipha into yokuhlunga, futhi esingakwenza nje ukugeza ubuso bento yokuhlunga ngamanzi. Kuyenzeka impela ukuthi kususwe ukungcola okuthile, kepha akunamthelela omncane.
Isici sesihlungi esisha ngokuvamile simhlophe ngokubukeka, futhi singaba mnyama noma nsundu ngemuva kokusebenzisa isikhathi esithile. Lokhu ukukhangiswa kokungcola okuthile. Lezi zinto azikwazi ukugezwa kuphela ngokugeza ngamanzi. Noma ngabe indawo ihlanzekile, umphumela wokuhlunga akukhona Ukuqiniseka ukuthi wonke umuntu uthenga izinto zokuhlanza amanzi ukwenza umthombo wamanzi uhlanzeke, futhi ungene esikhundleni sesihlungi esingahlanzekile. Empeleni, isangcolisa umthombo wamanzi.
Ngakho-ke, ngokubhekela ezempilo nezokuphepha, akufanele ulibazise ukufaka into yesihlungi bese uhlanza into yokuhlunga ngokwakho. Ukusetshenziswa okunengqondo kwento yokuhlunga kungenza isihlanza amanzi sihlanze ngeqiniso. Isitayela sokuhlanza amanzi naso senze ushintsho olukhulu. Abanye abahlanza amanzi banokushintsha okulula kwesihlungi. Ungathenga into yokuhlunga ngokwakho ukuyisusa. Kukhona nezinto ezintsha ezisetshenziswe isikhathi eside. Uma ungafuni ukushintsha into yokuhlunga njalo, Ungaphinda ubeke endaweni yokuhlanza amanzi yakudala ekhaya lakho elula.